PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-09-03 - Ngiyasihlaba isinqumo sabecomrades
Ngiyasihlaba isinqumo sabecomrades
Ilanga langeSonto - 2017-09-03 - Ezemidlalo - MZWAMANDLA ZONDI
ISINQUMO secomrades Marathon Association (CMA) sokuba umjaho wangonyaka ozayo usongwe emoses Mabhida Stadium kubukeka sizoshaya kakhulu kubagijimi abazothwala kanzima ukuphula irekhodi lika-5:18 elibekwe ngudavid Gatebe ngonyaka wezi-2016 kusukwa emgungundlovu kubhekwe ethekwini.
Ngesikhathi ugatebe ebeka leli rekhodi, lo mjaho ubuphela esahara Kingsmead Cricket Stadium eqhele ngamakhilomitha angaphezudlwana kancane kwamabili emabhida Stadium.
Isenzo sabecma sokufuna abagijimi baphule irekhodi elibekwe emzileni omfushane, sifana ncamashi nesetwo Oceans Marathon lapho kuthiwa umsubathi ozophula irekhodi likathompson Magawana uzothola ur1 million. Umagawana uphethe irekhodi lika-3:03:44 alenza ngowe-1988. Lesi senzo salezi zinhlangano sibukeka siwukudlala ngabagijimi njengoba imizila osekugijinywa kuyona ingefani. Umagawana waphula irekhodi emzileni ohluke kakhulu kunalona osekugijinywa kuwona manje.
Ngiyavuma ukuthi imoses Mabhida Stadium inkulu ngokwanele ukuba abasubathi bakwazi ukuzelula kahle imisipha ngemuva komjaho kwazise kunepeople’s Park nezinye izindawo lapho abasubathi bengazihlalela khona kahle ngemuva kwalo mjaho, kodwa ukuthi kusetshenziswe irekhodi likaGatebe ngikubona kungenabo ubulungiswa.
Okunye okuhle ngemabhida Stadium wukuthi nendawo yokupaka izimoto inkulu ngokwanele uma kuqhathaniswa nekingsmead Cricket Stadium lapho umjaho ubusongwa khona kule minyaka edlule. Nokho ngibona kuzokuba nzima kakhulu ukuba kube khona umsubathi osondela esikhathini sikagatebe.
Ngokwami njengoba lo mjaho usuzosongwa emabhida Stadium bekufanele kubekwe irekhodi elisha lakhona, hhayi le nto eshiwo YICMA. Ungasiqopha kanjani isikhathi esisha emzileni omude ngamakhilomitha amabili uma kuqhathaniswa nowerekhodi?
Umsubathi wesilisa nowesifazane ozofika kuqala emabhida ngonyaka ozayo nguyena okufanele anikwe irekhodi lasemabhida Stadium bese kuthi ugatebe ahlale nerekhodi lakhe lasekingsmead kanjalo nofrith van der Merwe ophethe elabesifazane aligcine. Elikafrith lingu-5:54 njengoba alibeka ngowe-1989.
Uma abadidiyeli balo mjaho benayo imali kufanele bayifake emiklomelweni etholwa ngabasubathi kwazise lo R440 000 ozotholwa yizingqwele ngokwahlukana kobulili, muncane kakhulu uma ubheka izinselelo abasubathi abadlula kuzona belungiselela lo mjaho.
Abasubathi bathi kumba eqolo ukuziqeqeshela icomrades Marathon ekubeni imali etholakala khona kayigculisi neze. Kuyihlazo ukuthi umuntu angaqala ukuziqeqeshela icomrades ngozibandlela (December) azicije kuze kube ngunhlangulana (June) bese ethola u-r440 000 ngokuyinqoba kuthi ophume endaweni ye-10 athole u-r21 000. Ubongumusa Mthembu oyingqwele yanonyaka yecomrades usanda kuphumela obala ethi ukucijela lo mjaho kudinga imali elinganiselwa ku-r45 000.
I-CMA kufanele isebenze kanzima ukuthola abaxhasi ukuze inike izingqwele imiklomelo econsisa amathe ukubeka lo mdlalo wezokugijima ezingeni leminye emikhulu kwazise kunabasubathi abaphila ngakho ukugijima.
Kubuhlungu kabi ukuhamba uhlonishwa ngabantu bekuhalalisela ngokunqoba kwakho bese kungena amakinathi kwi-account yakho. Ukugijima icomrades kuwukhahlaza kuwuqede umzimba, yingakho ngiphakamisa ukuthi izingqwele zicatshangelwe kangconywana ngokusebenza kwazo kanzima zilungiselela lo mjaho.
Icomrades Marathon izokube igubha iminyaka engama-93 lo mjaho wasungulwa ngonyaka ozayo kanti kulindeleke ukuba ingenelwe ngabasubathi abayizi-20 000.